दीर्घकालीन पीडा प्रबन्धन: औषधी र वैकल्पिक उपचार - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कम्पनी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार मनोरञ्जन औषधि जानकारी, समाचार औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य समाचार, कल्याण समुदाय, कल्याण समाचार
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> तपाईको पुरानो दुखाई व्यवस्थापन विकल्पहरू के के हुन्?
तपाईको पुरानो दुखाई व्यवस्थापन विकल्पहरू के के हुन्?
दीर्घकालीन पीडालाई कुनै पीडा भनेर परिभाषित गरिएको छ जुन to देखि months महिना वा सो भन्दा बढि रहन्छ। सामान्यतया, यो अन्तर्निहित स्वास्थ्य अवस्थाको प्रत्यक्ष परिणाम हो पछिल्ला चोटहरू, पछाडि समस्याहरू, स्नायु क्षति, वा फाइब्रोमाइल्जिया । तथ्या .्कले यो संकेत गर्दछ पाँच मध्ये एक वयस्क संयुक्त राज्य अमेरिका मा जीर्ण पीडा संग। उही समयमा, रिपोर्टहरू यो देखाउँदछ बढ्दो अन्तर्गत उपचार । बहु शर्तहरूको साथ बिरामीहरूमा दीर्घकालीन पीडा व्यवस्थापन जटिल हुन सक्छ। यो कारण निर्धारणको साथ सुरू हुन्छ।
पुरानो पीडाको प्रकार
दीर्घकालीन पीडा प्रायः तीन आधारभूत वर्गीकरण प्रकारहरूमा पर्दछ:
Nociceptive पीडा ऊँचाको अपमान वा चोटपटक सामान्य प्रतिक्रिया प्रतिनिधित्व गर्दछ जस्तै छाला, मांसपेशिहरू, नेत्रगत अंगहरू, जोड़हरू, टन्डनहरू, वा हड्डीहरू। Nociceptive पीडा को एक उदाहरण गठिया हो।
न्यूरोपैथिक दुखाई अन्यथा स्नायु दुखाइको रूपमा चिनिन्छ। यो एक प्रकारको पुरानो दुखाई हो जब केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा नसहरू घाइते वा बिग्रिन्छन्। मेरुदण्डमा घाउ दुख्ने, प्रेत अंग (पोस्ट-अंगच्छेदन) दुखाई, र पोस्ट स्ट्रोक केन्द्रीय दर्द वा दाद neuropathic पीडा का केही उदाहरण हो।
सूजन दर्द टिश्यु ईन्फ्लेमेसन को साइटमा बिभिन्न मध्यस्थकर्ताहरु द्वारा nociceptive दर्द मार्ग को सक्रियण र संवेदनशीलता को एक परिणाम हो। सूजनले गर्दा हुने पीडाको उदाहरणमा एपेंडिसाइटिस, रूमेटोइड गठिया, भड्काउने आंत्र रोग, र हर्पेस जोस्टर समावेश छ।
त्यहाँ केहि प्रकारको पुरानो पीडा हुन सक्छ - जस्तै फाइब्रोमाइल्जिया र तनाव टाउको दुख्ने - जुन सजीलै वर्गीकृत गर्न सकिदैन, र यी मुख्य प्रकारहरू बाहिर पतन। यी कोटीहरू महत्त्वपूर्ण छन् किनकी पीडा प्रकारले लामो भूमिका खेल्न सक्छ जुन लामो पीडा उपचार विकल्पहरू सबैभन्दा प्रभावकारी हुनेछ।
सम्बन्धित: दाद उपचार र औषधि
पुरानो दुखाइ राहतको लागि सामान्य औषधिहरू
त्यहाँ धेरै औषधीहरू छन् जुन सामान्य रूपमा पुरानो पीडा भएका व्यक्तिहरूका लागि सिफारिश गरिएको छ:
Zyrtec र claritin बीच के फरक छ?
Nonsteroidal विरोधी भड़काउने ड्रग्स र एसिटामिनोफेन: त्यहाँ धेरै प्रकारका नन्स्टेरॉइडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी औषधीहरू (NSAIDs) छन्। तिनीहरू मध्ये केही (जस्तै आइबुप्रोफेन ) काउन्टर भन्दा बढी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अरूहरू, जस्तै मोबिक ( meloxicam ), पर्ची द्वारा उपलब्ध छन्।
सामयिक दुखाइ औषधी : ओभर-द-काउन्टर सामयिक क्रीमहरूले राहत दिन सक्छ। वा, प्रिस्क्रिप्शन लिडोकेन प्याचहरू क्षेत्रमा लागू गरिएको (१२ घण्टा र १२ घण्टाको छुटको लागि) दुखाइ कम गर्न सकिन्छ।
Antidepressants: एन्टीडिप्रेससन्टहरूका केही पुराना कोटीहरू दर्द नियन्त्रण गर्न धेरै सहयोगी हुन सक्छन्; विशेष रूपमा tricyclic antidepressants। यी औषधिहरूले डिप्रेशनको लागि आवश्यक पर्ने खुराकहरू भन्दा कमको खुराकमा पीडा कम गर्न सक्छ।
एन्टिकोनभल्सेन्ट्स (एन्टी-जप्ती) औषधिहरू: यी औषधीहरू केही प्रकारको स्नायु प्रकारको दुखाइको लागि धेरै उपयोगी हुन सक्दछन् (जस्तै जलेको, गोली हान्ने कष्ट)
मांसपेशी आराम : यी औषधीहरू प्राय जसो मांसपेशियोंको ऐंठनको तीव्र सेटिंगमा प्रयोग गरिन्छ।
नर्व ब्लकहरू: यसले मेरुदण्डको स्तम्भको एपिडुरल स्पेसमा इन्जेक्सनहरू समावेश गर्दछ र लामो अवधिमा दुखाइ प्रबन्धन प्रदान गर्दछ, विशेष गरी पुराना पीठ सर्तहरूको लागि। त्यहाँ अस्पतालको सेटिंग्समा नर्व ब्लकको बिभिन्न प्रकारहरू छन्, र तिनीहरू शरीरको क्षेत्रमा उपचार भइरहेका छन्। सामान्यतया, तिनीहरू मेरुदण्ड क्षेत्र मा इंजेक्सन छन्।
ट्रिगर पोइन्ट इंजेक्शन: अर्को प्रकारको दुखाई व्यवस्थापन प्रविधि ट्रिगर पोइन्ट इन्जेक्शन (TPI) को रूपमा चिनिन्छ। यो एक ईन्जेसन हो जसमा कोर्टिकोस्टेरोइड र / वा एनेस्थेटिक हुन्छ, र सिधा इन्जेक्सन गरिएको हुन्छ पीडाको कारण क्षेत्रमा।
ओपियोड्स: जब उचित रूपमा प्रयोग गरिन्छ, यदि गैर-ओपिओइड औषधीहरू प्रभावी हुँदैनन् वा बर्दाश्त हुँदैनन् भने, केहि प्रकारको दीर्घकालीन पीडालाई नियन्त्रण गर्न ओपिओइडहरू धेरै प्रभावकारी हुन सक्छन्। तिनीहरू कम प्रभावकारी हुन्छन् वा स्नायु प्रकारको दुखाइमा उच्च खुराकको आवश्यक पर्दछ। दिन र रात उपस्थित रहेको दुखाइको लागि, लामो-अभिनय ओपिओइड सामान्यतया सिफारिस गरिन्छ, र सफलता दर्दको लागि छोटो अभिनय ओपिओइडको साथ पूरक हुन सक्छ। एक दुखाइ प्रबन्ध विशेषज्ञले ओपियोड्सको आवश्यकताको मूल्या can्कन गर्न सक्दछ।
सम्बन्धित: दुखाइ राहतका लागि सबैभन्दा उत्तम के हो?
जब दुखाई गम्भीर हुन्छ, बिरामीहरूले राहतको लागि ओपिओइडमा जान रुचाउँछन्। यद्यपि डाक्टरहरूले यु.एस. फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले तय गरेको नयाँ प्रिस्क्रिप्शन मापदण्डहरूको पालना गर्नुपर्‍यो (साथै व्यक्तिगत राज्य र फार्मेसी नीतिहरू) ओपियोड्सको अधिक प्रयोगबाट। ओपिओइड-सम्बन्धित मृत्युको मात्रा विगत केही वर्षमा नाटकीय रूपमा बढेको छ, जसले दुबै चिकित्सक र बिरामीहरूलाई छोडेको छ जुन लामो पीडाको कमदेखि मध्यम स्तरको उपचारको लागि खोज्ने पुरानो दुखाइ अनुभव गर्दछ।
प्राकृतिक पुरानो पीडा राहत
दीर्घकालीन क्रोनिक पेन प्रबन्धनको लागि, गैर-ओपिओइड विधिहरू उपयुक्त हुन्छन्:
वैकल्पिक चिकित्सा: सिफारिश गैर-औषधीय उपचारहरूमा एक्यूपंक्चर, बायोफिडब्याक, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी, मसाज, र बाह्य TENS इकाइहरूको प्रयोग समावेश छ। रिपोर्टहरूले संकेत गर्दछ कि मनोवैज्ञानिक साथ पेयर गरिएका यी दुखाई व्यवस्थापन प्रविधिहरू अत्यन्त प्रभावकारी छन्।
व्यायाम: हल्का व्यायाम, जस्तै योग, परिक्रमण सुधार र तनाव कम गरेर केहि प्रकारको पुरानो पीडाको साथ मद्दत गर्न सक्छ। यो विशेष गरी गठिया र कमर दुख्नेको लागि प्रभावकारी छ।
तातो र चिसो : तातो प्याड र बरफ कम से कम साइड इफेक्टको साथ धेरै पटकको पुरानो दुखाई प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मेरुदण्डको उत्तेजना: SCS एउटा त्यस्तो उपचार हो जुन मस्तिष्कमा पुग्नु भन्दा पहिले दुखाइको स mas्केतहरू मास्क गर्दछ - सानो उपकरण शरीरमा लगाइएको हुन्छ रीढ़ की हड्डीमा स deliver्केत दिन। यो पुरानो पीठ, खुट्टा, वा हात दुखाइ को लागी एक विकल्प हुन सक्छ।
उदाउँदो पुरानो पीडा उपचार विकल्प
ओपिओइड लतको सम्भावनाको कारण, अनुसन्धानकर्ताहरूले निरन्तर प्रभावकारी विकल्पहरूको खोजी गरिरहेका छन् जुन मास्कको सट्टामा पीडा संवेदना रोक्दछ।
ट्रान्स्क्रानियल प्रत्यक्ष-वर्तमान उत्तेजना, वा tDCS , पुरानो पीडा उपचारको लागि एक संभावित प्रभावी गैर-औषधीय दृष्टिकोणको रूपमा कर्षण प्राप्त गर्दै आएको छ। क्लिनिकल परीक्षणले घुँडा ओस्टियोआर्थराइटिससँग सम्बन्धित पीडामा उल्लेखनीय सुधार देखाउँदछ।
अनुसन्धानले दीर्घकालीन पीडाको स्वत: प्रतिरक्षा कारणहरूमा पनि ध्यान केन्द्रित गरेको छ। एक संक्रमण वा चोट एक स्वत: प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रोम्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्राय: अदृश्य हुन्छ, र यसले अत्यधिक पीडा निम्त्याउँछ। एन्टिबडी प्यानलहरू लामो दुखाइ र को लागी नयाँ उपचार हुन सक्छ अनुसन्धान उत्साहजनक नयाँ विकल्प खोल्नु पर्छ।
के एक खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउँछ
एसपीआर थेराप्यूटिक्स एक million6मिलियन को सम्झौता प्रदान गरियो गैर-ओपिओइड दर्द व्यवस्थापन थेरापीमा अनुसन्धानका लागि अमेरिकी सुरक्षा विभागबाट। यसले एसपीआरको स्प्रिन्ट परिधीय स्नायु उत्तेजना प्रणालीलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ र उनीहरूसँग बस्नेहरूको लागि उन्नत क्लिनिकल परीक्षणहरू गर्न मद्दत गर्दछ। न्यूरोपैथिक पीडा । यो लक्षित तंत्रिका फाइबर सक्रिय गर्न र ओपिओइड बिना पीडा राहत प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो।
पुरानो दुखाई प्रबन्धनका लागि संसाधन
अमेरिकी क्रोनिक पेन संघ जो मानिसहरु लाई लामो पीडा छ को लागी बहुमूल्य जानकारी को एक बहुमूल्य जानकारी प्रदान गर्दछ। जो वर्तमानमा उपचार गरीरहेका छन् उसले अन्य विकल्पहरू र औषधिहरू पत्ता लगाउन सक्छन, तर तपाईको व्यक्तिगत चिकित्सक र फार्मासिष्टलाई परामर्श लिनु यो उत्तम हुन्छ।
जोसँग पीडा फेला पारे उनीहरूको स्वास्थ्यमा भावनात्मक टोल लिइएको छ, टी उ अमेरिका दुखाइ फाउन्डेसन जागरूकता अभियान र अनलाइन समर्थन समूहहरूको सूची प्रदान गर्दछ।
कोरोनाभाइरसको लागि स्व-पृथक हुँदा म बाहिर जान सक्छु?
म कसरी मेरो शरीर मा खमीर बाट छुटकारा पाउन सक्छु
हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक कान संक्रमण मा मद्दत गर्न सक्छ
कसरी घर मा मध्य कान संक्रमण को उपचार गर्न को लागी